Mashoko aVaChinamasa Okonzera Kupokana Munyika
Mbudzi 18, 2011
Zimbabwe's Justice Minster Patrick Chinamasa moves a motion in parliament to pass a constitutional amendment bill, Harare (February 2010 file photo)
Masangano akazvimirira ega anoti haasi kuzosiya gurukota rezvemitemo, VaPatrick Chinamasa, vachienderera mberi nekuudza pasi pose kuti Zimbabwe haisi kuzovandudza mashandiro emapurisa nemauto.
Vachitaura pamusangano svondo rino muHarare, sachigaro veNational Constitutional Assembly, VaLovemore Madhuku, vakati VaChinamasa vanofanirwa kutemwa nemazai akaora senzira yekuratidza kuti havasi kufara nezviri kutaurwa naVaChinamasa.
Izvi zvinotevera mashoko akataurwa naVaChinamasa kuGeneva mwedzi uno, uko vakati pari zvino Zimbabwe haisi kufunga zvekuvandudza mashandiro emapurisa namauto kunyange hazvo chibvumirano cheGlobal Political Party chichisungira hurumende yemubatanidzwa kuita izvi.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kuna VaChinamasa mbune divi ravo.
Asi VaMadhuku vanoti kana vanhu vachida kuti zvinhu zvichinje munyika, vanofanirwa kupikisa zvinotaurwa naVaChinamasa avo vanoita izvi vachiti vakamirira nyika yose asi vachimirira pfungwa dzeZanu PF chete.